Vavaka hahazoana fandresena amin'ny raharaham-pitsarana | TOKO VAVAKA
Home vavaka Vavaka ho an'ny fandresena amin'ny raharaham-pitsarana
Romana 8:33: Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina.
Andriamanitra maniry fandresena ho antsika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra, na ara-batana na ara-panahy. Na dia alohan'ny hidirantsika amin'ny ady amin'ny fahavalontsika aza dia efa nanomana ny fandresena Andriamanitra. Nilaza izy ao amin'ny bokin'ny Isaia 45 fa handeha eo alohanay Izy ary hanao làlana miolikolika, ary noho izany alohan'ny hahatongavantsika ny lalambe sasany dia efa nialoha antsika Andriamanitra mba hanome antsika fandresena. Androany isika dia handray anjara amin'ny vavaka fandresena amin'ny raharaha fitsarana. Rehefa mivavaka am-pinoana isika anio, dia hiady amin'ny adin'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitry ny lanitra.
Tena zava-dehibe anefa fa rehefa mitady an'Andriamanitra handresy amin'ny fitsarana ianao dia tsy anjaranao sy ny tsy rariny sy ny tsy fitoviana satria tsy hanome voninahitra ny vavaka toy izany Andriamanitra. Nilaza izy ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 11 fa ny mizana sandoka dia fahavetavetana eo imason'ny Tompo fa ny lanja marina ihany no ankasitrahany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, Andriamanitra tenany mihitsy no mitady manohitra ny tsy rariny sy ny hitsiny, na dia ny Soratra Masina aza milaza amintsika fa Andriamanitra marina isika. Rehefa raikitra izany ary azontsika antoka fa tsy eo amin'ny sisin'ny fitsarana isika, dia afaka mandroso ankehitriny ny raharaha momba antsika any amin'ny lapan'ny lanitra ka hitady ny famindram-pon'Andriamanitra, ka ho mora kokoa ho antsika ny fandresenao eto ambonin'ny tany.
Tena zava-dehibe ho antsika ny mahatakatra fa ny fiainana aloha indrindra amin'ny lafiny ara-panahy alohan'ny ara-batana sy ny hoe manatona azy amin'ny fomba fijery ara-batana irery dia mety tsy tena hendry. Jesosy Kristy raha mampianatra ny mpianany ny fomba hivavaka dia nampianatra azy ireo hangataka ny sitrapon'Andriamanitra hatao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Midika izany fa raha tsy mandamina ny adin'andriamanitra any an-danitra aloha isika ary miara-mandeha Aminy mba hahazoana antoka fa miorina ny fandresentsika, dia tsy tokony ho gaga isika raha any amin'ny faran'ny fitsarana dia very ny raharaha eto an-tany.
Nahazo vaovao tsara ho anao aho anio, satria efa nitady ny tavan'ny Tompo momba ity raharaha ity ianao dia tsy ho very izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy raharahako na hiady aminao na tsia ny raharaha, tsy raharahako na miatrika fotoana ianao na tsia, fa rehefa miantso ny Tompon'ny lanitra anio ianao dia hamonjy anao. Ity raharaha ity dia handeha amin'ny lalana arahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Mihainoa ahy ankehitriny, na dia meloka aza ianao na nanao zavatra ratsy, dia hamaly anao ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsarovy ny raharaha momba ilay vehivavy tratra tamin'ny fijangajangana, tao amin'ny Jaona 8: 3-11, mendrika ny ho faty araka ny lalàna izy, nividy rehefa nentina tany amin'i Jesosy Kristy, ilay mpitsara ny rehetra, ny famindrampon'Andriamanitra voavonjy azy. Midika ve izany fa ankasitrahan'Andriamanitra ny fijangajangana? Sanatria izany! Andriamanitra dia tsy hanaiky ny ota intsony, fa ny marina dia mbola mijanona, fa ny zavatra rehetra atao amin'ny ota dia manohitra an'Andriamanitra fa tsy olona, ​​ary rehefa mamela anao Andriamanitra dia tsy misy olona afaka mametraka fiampangana aminao ary hahomby. Izany no antony nilazako anao androany, rehefa manao izany vavaka izany ianao amin'ny fandresena amin'ny fitsarana, dia hahazo fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao.
Iray amin'ireo zavatra tsy maintsy tadiavintsika rehefa miangavy ny raharaha momba antsika eo anatrehan'Andriamanitra dia ny famindram-pony. Ny Baiboly milaza ao amin'ny Hebreo fa tokony ho tonga amim-pahasahiana ao amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana isika mba hahazoantsika famindram-po ary noho izany ny zavatra voalohany tokony ataontsika rehefa mangataka fandresena amin'ny raharaham-pitsarana dia ny hitady ny famindram-pony satria isika dia afaka mahazo ny fahamarinany ihany. ny toe-javatra misy antsika rehefa nohamarinina amin'ny famindram-pony isika.
Na eo aza izany dia vonona hanome ny rariny antsika Andriamanitra amin'ny karazana fampahoriana rehetra lalovantsika eo am-pelatanan'ny olona. Ny bokin'ny Salamo 10: 6 dia milaza fa ny Tompo dia mizaha fahamarinana sy fahamarinana ho an'izay ampahorina. Ary koa, ao amin'ny Isaia 54:17, Andriamanitra dia nampanantena antsika fa tsy misy fiadiana namboarina hamelezana antsika hivoatra ary ny lela rehetra mitsangana hanohitra antsika dia hanameloka azy Izy. Noho izany dia tsy tokony hatahotra isika na na dia ny zavatra nataontsika aza, nanao ny tsy fahalalana isika dia afaka mikasika ny fon'ny olona rehetra voakasiky ny mpitsara Andriamanitra. Milaza amintsika ny Ohabolana 21: 1 fa eo am-pelatanan'ny Tompo ny fon'ny mpanjaka ary tahaka ny renirano rano, dia mamadika azy araka izay sitrapony.
Midika izany fa na dia meloka aza isika tamin'ilay fahadisoana nefa feno fahatsorana isika ary mibebaka amin'ny nataontsika, dia afaka manohina ny fanapahan-kevitr'ireo fitsarana Andriamanitra, ka izany no hiseho ho tombotsoa ho an'ny tenantsika manokana.
Andriamanitra no Tompontsika amin'ny zavatra rehetra. Ny Salamo 24 dia milaza amintsika fa ny tany dia an'ny Tompo sy ny fahafenoany, izao tontolo izao sy izay rehetra monina ao, anisan'izany ny mpanohitra sy ny mpitsara antsika. Ny Salamo 62:11 dia milaza amintsika koa fa ny hery rehetra dia avy amin'Andriamanitra, raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy manana hery amintsika Andriamanitra na any an-danitra na eto an-tany. Hatreto aloha dia fantatsika fa Andriamanitra dia tsy afaka hiditra amin'ny ady ary hivoaka resy. Noho izany dia zava-dehibe ny tsy mankarary fa fa apetrantsika aminy ny fanahiantsika satria Izy mahavita mikarakara ny zava-drehetra. Filipiana 4: 6 mba tsy hisahirana na inona na inona, fa amin'ny zavatra rehetra amin'ny alàlan'ny vavaka sy ny fifonana, hampahafantarintsika amin'Andriamanitra ny fangatahantsika, koa avelao hivavaka amin'ireto vavaka manaraka ireto isika:
• Ray any an-danitra Te-hisaotra anao aho satria marina ny teninao ary tsy mandainga velively ianao, hoy ianao tamin'ny teninao fa ny fifandanjana sandoka dia fahavetavetana aminao. Noho izany dia mangataka aminao aho mba hamalianao ahy ny tsy rariny sy ny tsy rariny rehetra ampiasain'ny fahavaloko ao amin'ny fitsarana ary omenao fandresena aho amin'ny anaran'i Jesosy.
• Tompo ô, nampanantena ianao fa tsy hisy fiadiana manda amiko izay hivoatra ary ny lela rehetra mitsangana hanohitra ahy dia hotsaraina. Noho izany dia mangataka aho mba hanamelohana ny lela rehetra mitsangana hanameloka ahy amin'izao fotoana izao. Fa ny teninao dia milaza fa tsy misy mahay manameloka ny olom-boafidinao, satria Ianao no manamarina. Tompo no manamarina ahy sy hanafaka ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
• Tompokolahy ô, sahala amin'i David mivavaka dia mivavaka koa aho satria matoky anao aho, aza avela ho menatra aho ary aza avela handresy ahy amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavaloko.
• Dada Ianao nilaza fa tokony ho tonga amim-pahasahiana eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana aho mba hahazoako famindram-po ary hahitako fahasoavana manampy amin'ny fotoana ilana azy. Tompoko tonga eo anoloan'ny seza fiandriananao aho amin'izao fotoana izao ary mangataka famindram-po amin'ity toe-javatra ity aho. Tompo ô, mibebaka amin'izay rehetra nataoko aho mba handraisana anjara amin'ity raharaha ity ary mangataka aminao aho fa amin'ny ran'i Jesosy no hanaisanao ny fahadisoako ary hanafaka ahy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
• Nilaza ny Tompo fa eo am-pelatananao ny fon'ny mpanjaka ary manana ny fahefana hitodika azy amin'ny lalana tadiavinao ianao. Koa atolotro ny olona rehetra voakasik'ity raharaha ity ho eo am-pelatananao ary mivavaka aho fa hampitodika ny fony ho sitraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy ireo.
• Tompoko, tsy fantatro hoe inona no manohana ny fahavaloko amin'ity tranga ity fa ny Tompo fa tsy ny fahatokisana ny Chariota na soavaly nofidiko mba hahatadidy ny anaranao matanjaka indrindra. Ny anaranao dia tilikambo mafy ary fantatro fa raha miditra ao aho dia ho voavonjy, tompoko, vonjeo amin'ny tanan'ny fahavaloko ary omeo fandresena amin'ny anaran'i Jesosy aho.
• Ry Ray any An-danitra, mivavaka aho fa ny fahamarinanao dia hanjaka amin'ity sy izay mety ho very tao anatin'izany fanombohana izany, haverina amiko avokoa izy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka hahazoana famonjena amin'ny fiarovana
Next lahatsoratraVavaka fanadiovana ara-panahy
20 Vavaka ho an'ny fiarovana sy fiarovana
Vavaka ho an'ny Firenena ao Nizeria
30 Ny vavaka dia manohitra ny fiampangana lainga